ဂိမ်း GTA အွန်လိုင်း ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေး - GTA-NOW.com
ဂိမ်း GTA အွန်လိုင်း ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေး
သတင်းကောင်းချက်ချင်းစတင်ကြပါစို့ — ထို GTA အွန်လိုင်းဖို့ Access ကိုဂိမ်း Grand Theft Auto V. ၏လိုင်စင်ရမိတ္တူအပေါငျးတို့သပိုင်ရှင်တွေရဖို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ
Grand Theft Auto အွန်လိုင်း — 16 ကစားသမား (က PS4, Xbox One နဲ့ PC အတွက်ဗားရှင်းအတွက် 30) တစ်ဦးစွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ပြောင်းလဲနေသောပွင့်လင်းကမ္ဘာ။ ဒီလောကက Grand Theft Auto V ၏ပထဝီနှင့်ဂိမ်းစက်ပြင်မှာသူ့ရဲ့ဇစ်မြစ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်တိုးချဲ့နှစ်ဦးစလုံး Rockstar Games ကရေးသား ပို. ပို. ပစ္စည်းများပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျေးဇူးတင်စကားအဖြစ်ကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ Grand Theft Auto အွန်လိုင်းခုနှစ်တွင်နာမည်ကြီးဂိမ်းစီးရီးအပေါငျးတို့သထူးခြားတဲ့ features တွေကိုတင်ဆက်: အရေးယူမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောလွတ်လပ်ခွင့်, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလုပ်အမျိုးမျိုးကို … အပေါငျးတို့သညျဤတစ်ချိန်တည်းမှာကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားတစ်ဦးဗဟုရရှိနိုင်ပါ!
ကစားသမားများအပေါငျးတို့သဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူအစဉ်အလာဂိမ်းသည် Modes အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့, စုပေါင်းအတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်, ဂိုဏ်းအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်, အတူတကွအလုပ်လုပ်, တယောက်တည်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Grand Theft Auto Online ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်စူးစမ်းလေ့လာနိုငျသညျ, ကကြည့်နှင့်အလုပ်ဖြစ်တယ် — ကိုယ့် Grand Theft Auto အတွက်တူ V.
ကစားသမားတစ်ဦးထူးခြားသောအသွင်အပြင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတစ်ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးနိုင်မည်ပန်းခြံညှိကားတွေစုဆောင်း, အိမ်ခြံမြေဝယ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစက်ဝိုင်းထဲမှာရွှေ့ဖို့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ငွေရှာဖို့, Quest များ, မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်အလုပ်အကိုင်အတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့် ပို. ပို. features အသစ်ရတဲ့လိမ့်မည်။ Grand Theft Auto အွန်လိုင်းအဆက်မပြတ် Grand Theft Auto တစ်စီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးမှာ dynamic ကမ္ဘာအတွက်ပြောင်းလဲရန်နှင့်ချဲ့ထွင်လိမ့်မယ်။
ကုမ္ပဏီ၏ပြုစုသူ Rockstar Games ကမှအရာရှိတဦးကသတင်းအချက်အလက်။